Global Aawaj | केटीले तपाईलाई मन पराउँछिन् भनेर कसरी थाहा पाउने ? केटीले तपाईलाई मन पराउँछिन् भनेर कसरी थाहा पाउने ?
१५ माघ २०७८ 10:50 am
काठमाडौ । के तपाईंले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ कि केटीले तपाईंलाई मन पराउँछिन् ? सायद एउटी महिलाले तपाईंलाई एउटा चिन्ह दिएको छ जसले तपाईंलाई थाहा दिन्छ कि उनी तपाईंलाई मन पराउँछिन्। यो धेरै कम मान्छेमा हुन्छ। जब कुनै केटीले कसैलाई मन पराउँछिन्, उनी सरल शब्दमा प्रेम व्यक्त गर्दिनन् । तर, महिलाले इशाराको सहारा लिन्छन् । पुरुष प्रेम व्यक्त गर्न जान्छन्। तर, महिलाहरु यस मामिलामा धेरै फरक छन्। त्यसोभए तपाईलाई केटीले तपाईलाई मन पराउँछ कि भनेर कसरी थाहा पाउने ?
महिलाले तपाईलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि यदि एउटी महिलाले तपाईलाई सामान्य भन्दा अलि लामो समयसम्म हेरिरहेकी छिन् भने उसले तपाईलाई साथी वा सहकर्मीको रूपमा लिने सम्भावना छ। के तपाई प्रायः उसलाई भेट्न जानुहुन्छ र तपाईले उसलाई हेर्दै समात्नु हुन्छ ? खैर, यो एक सकारात्मक संकेत हो कि एक महिला तपाईं आकर्षित छ। यदि एक केटीले तपाईलाई हेर्छ भने उसले तपाईलाई जाँच गरिरहेको हुनुपर्छ। वास्तवमा केही अध्ययनहरूले संकेत गरेका छन् कि लामो समयसम्म आँखाको सम्पर्कले दुई व्यक्तिहरूबीचको प्रेमको भावनालाई ट्रिगर गर्न सक्छ।
के तपाईंले कहिल्यै ध्यान दिनुभएको छ ? हामीले मन नपराउने व्यक्तिहरूसँग हामी विरलै बलियो सम्बन्ध बनाउँछौं। वास्तवमा हामी जानाजानी कुराकानीमा आकर्षित हुन नचाहेका मानिसहरूसँग आँखा सम्पर्क गर्नबाट जोगाउँछौं। साथै, विशेषज्ञहरूले संकेत गर्छन् कि बच्चाहरूले उनीहरूलाई रुचि राख्ने व्यक्तिहरूसँग आँखा सम्पर्क राख्छन्।
यदि कुनै केटीले तपाईलाई मन पराउँछिन् भने उसले पनि आफ्नो शरीरको स्थितिबाट तपाईलाई मनपर्छ भनेर बताउन प्रयास गर्नेंछिन्। उनी तपाईं तिर झुकेर तपाईंसँग कुरा गर्छिन्। जब उनी बस्छिन्, उनी आफ्नो खुट्टा पार गरेर बदिस्ननन्। मुट्ठी बन्द नगर्नुहोस् र आफ्नो हत्केला खुला राख्नुहोस्। उनी कपालसँग खेलिरहेको देख्न सकिन्छ ।
मानिसहरूले आफूलाई मन नपर्ने मानिसहरूलाई छुँदैनन्। यदि केटीले तपाइँमा रुचि राख्छ भने उसले तपाइँको हात, हात वा काँधमा पुग्न र छुने प्रतिरोध गर्दैन। उनले तपाइँको ज्याकेट सीधा गर्नेछन् वा तपाइँको घुँडा छुन पुग्ने छ जब उनले कुराकानीको क्रममा एक बिन्दु बनाउँछिन्। जति धेरै उसले तपाईलाई छोयो, ऊ तपाईमा चासो राख्छे भनी अनुमान गर्नु त्यति नै सुरक्षित हुन्छ।
तपाईसँग नजिक हुन रुचाउँछिन्
अर्को राम्रो संकेत कि एउटी महिला तपाईमा चासो राख्छिन् कि उनी तपाईको नजिक हुन चाहन्छिन्। तपाईलाई मन पराउने महिलाले आफूलाई यसरी राख्छिन् कि उनी सधैं तपाईको कक्षामा हुनेछिन्। यो कुनै संयोग होइन कि उनी धेरै अवसरहरूमा तपाईंको वरिपरि छिन्। तपाईं खडा हुने बित्तिकै उनले तपाईंलाई पोस्ट गर्नेछिन्।
तपाईंको शारीरिक भाषा
सम्बन्धमा प्रतिबिम्बित गर्छिन् विज्ञहरू भन्छन् कि जब हामी कसैलाई मन पराउँछौं, हामी अवचेतन रूपमा हाम्रो शरीरको भाषा समायोजन गर्छौं। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ डेटमा हुनुहुन्छ र तपाइँ टेबलमा अगाडि झुक्नु भएको छ भने यो सम्भव छ कि उनले स्वाभाविक रूपमा त्यसो गर्नेछिन्। यो व्यवहारलाई ‘अन्तर्क्रियात्मक सममिति’ भनिन्छ र यो बाल्यकालमा सुरु हुन्छ।-नवभारत टाइम्स